Ugbo nduku nke mpaghara Novosibirsk - magazin "Usoro nduku"
Mikhail Tremasov, onye nnọchi anya mpaghara nke Siberia Federal District na Far East, LLC "GRIMME-RUS"
N’agbanyeghi onodu ubochi ihu igwe siri ike, emeputara ihe ubi na mpaghara Novosibirsk E kenyere mpaghara ndị dị na mpaghara ahụ maka imepụta ihe ọkụkụ, mana poteto chọkwara ọnọdụ ha.
Omenaala a toro n’azụ ime obodo ọ bụla. Ihe kariri ulo oru ugbo iri na abuo na-etinye aka na mmeputa mmeputa nke nduku. Mmezu nke nsonaazụ dị elu na-akwado site na iji teknụzụ dị elu na akụrụngwa nke oge a nke ndị nrụpụta ụlọ na ndị mmekọ mba ọzọ si mba Europe na America.
Ekwesiri ighota na afo abuo gara aga onodu ahia ka adighi nma nye ndi na emeputa nduku. Ahịa maka ngwaahịa dị na ọkwa dị ala, ọnụ ahịa nchekwa na-eto, ụzọ mgbasa ozi ọdịnala na mba Central Asia anaghị arụ ọrụ. N'ihe dị iche iche a, ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbo malitere ibelata mpaghara nke ịkọ ihe, ma ọ bụ ọbụna mechie mmepụta.
Ihe mbụ a kụrụ bụ obere ugbo, yana ndị nwere ọpụrụiche dịpụrụ adịpụ. Ffpụta ihe ọ bụla na-ekwu na nke a afọ nduku na-adịghị kụrụ ruo n'oge na-adịbeghị anya site kasị ibu nduku ugbo na mpaghara - JSC "Yemelyanovskiy"na-akọ ihe karịrị hekta 500.
O siri ike ikwu okwu banyere atụmanya: oke olu dị ukwuu nke poteto ndị e mepụtara na mpaghara ahụ bụ nke dị ala (ihe na-esiteghị na irube isi na teknụzụ ugbo, ojiji nke akụrụngwa oge ochie nke na-ezuteghị ihe ọgbara ọhụrụ)
A natara obere pasent nke mmepụta maka nhazi, nke na-adịghị enye aka na mmụba na ọnụahịa ngwaahịa. Mana ndị na-emepụta ihe ọkụkụ nwere nnukwu olile anya maka ọbịbịa PepsiCo na mpaghara Novosibirsk.
Na Febụwarị 15, 2019 na Sochi, n'oge nzukọ itinye ego na Russia, Gọvanọ nke Novosibirsk Region Andrey Travnikov na Onye isi ala nke PepsiCo na Russia, Belarus, Ukraine, Caucasus na Central Asia, Neil Starrock, bịanyere aka na nkwekọrịta maka iwu ụlọ nri nri na Novosibirsk.
Ihe ohuru a ga - eweputa akara ndi Lays. Anyị na-ekwu maka nhazi nke nduku 250300 nde nduku, nke, dị ka ndị na-arụ ọrụ ugbo mpaghara si kwuo, nwere ike imetụta akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ha, mmepe nke teknụzụ nke ugbo na, ikekwe, ịlaghachi na ụlọ ọrụ ndị hapụrụ mmepụta nduku.
Taa, ugbo 1 maka mmepụta nduku ke Novosibirsk mpaghara nwere ike n'ụzọ ziri ezi a na-akpọ SPH "Yarkovskoe". A na-ahụkwa ọnọdụ siri ike nke ugbo ahụ site na ijikọ ọnụ nke otu ndị otu, nke onye isi azụmaahịa nwere ọgụgụ isi Gleb Aleksandrovich Popovtsev na-eduzi.
"Yarkovskoye" nwere hekta 10 nke mpaghara akụ, ebe ekenyela hectare 000 maka nduku. Farzọ ọrụ ugbo dị elu na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-enye gị ohere ịnweta owuwe ihe ubi bara ụba ma dị elu. A na-echekwa nduku n'ime ebe nchekwa ewuru ọhụrụ nke nwere teknụzụ ọhụụ, yana mmefu kwa afọ maka akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa na ọnụ ọgụgụ nke iri nde rubles na ugbo a na-akpọ ego dị n'ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ.
Dabere na onye isi ọrụ ugbo ahụ, Vladimir Robertovich Koenig, SPH "Yarkovskoe" na-abawanye mmepụta nke akwụkwọ nri - karọt, yabasị na kabeeji, n'ihi na ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ maara ka esi eto ngwaahịa ndị dị elu ndị chọrọ na ahịa.
Ebe dị ịrịba ama na mmepụta akwụkwọ nri na mpaghara Novosibirsk bụ LLC "OPKH" DARY ORDYNSKA "nke poteto, karọt na beets na-akọ na mpaghara nke hectare 300. Isi nke ụlọ ọrụ ahụ, Shakir Suleimanov, bụ onye na-anabata ndị ọbịa, na-anabata nke ọma ma na-anabata ọbịa. Enwere ike ịchọta ngwaahịa nke ụlọ ọrụ a na shelf nke ụlọ ahịa Novosibirsk.
Ugbo akwukwo ozo na-eto eto di nso na Koltsovo sayensi obodo - LLC "Ubi nke Giant". Ogologo oge Elena Nikolaevna Polupanova na-eduzi ya. Isi iche iche nke ụlọ ọrụ a bụ imepụta akwụkwọ nri griin haus, mana ugbo a na-akọkwa poteto (na mpaghara nke hectare 130) wee na-eto karọt (hectare 40). A na-enye ngwaahịa maka ụlọ ahịa mkpọsa nke Novosibirsk na obodo satịlaịtị ya.
Akụkụ pụrụ iche nke Giganta Gardens LLC bụ ebe a na-edozi nke ọma, ebe usoro dị iche iche na-achị. Otu na-enwe echiche na usoro ọrụ niile n'ugbo ahụ na-emebi kpamkpam na ihe niile na-aga dịka atụmatụ dị ogologo.
N'ókèala obodo nta nke Priobsky, ọ nọ na-eto akwụkwọ nri na-emeghe ma na-emechi ala ihe karịrị afọ 20 Priobskoye CJSC... Onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ Viktor Petrovich Becker.
A na-emepụta ihe karịrị puku tọn akwụkwọ nri ọhụrụ ebe a kwa afọ. A na-eresị ndị ahịa azụ ahịa ngwaahịa ndị toro eto, na-enye ha ụlọ ọrụ gọọmentị, ụfọdụ na-ebubakwa ụlọ ahịa nke ụdọ mkpọsa na Novosibirsk.
Ugbo a nwere ubi nke mmiri gbara agba, ahịhịa ndụ, igwe ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ, ọtụtụ ụgbọ ala, ụlọ nkwakọba ihe, ebe a na-echekwa akwụkwọ nri, nke eji ngwa igwe ugbu a. Ihe a niile na-eme ka usoro mmepụta zuru ezu: itolite, nchekwa, mbupu na nnyefe nke ngwaahịa.
E nyere ZAO Priobskoye ọtụtụ diplọma na nrite na ihe ngosi, asọmpi na mmemme. Companylọ ọrụ ahụ na-eme ike ọ bụla iji melite arụmọrụ ọrụ na asọmpi n'ahịa, na-arụ ọrụ iji mụbaa mpịakọta mmepụta iji gboo mkpa na-arịwanye elu nke ọha mmadụ maka ngwaahịa akwụkwọ nri ọhụrụ. Isi ọrụ bụ ịkwado ntụkwasị obi ndị ahịa.
Enwere ike ịga n'ihu n'akụkọ banyere ụlọ ọrụ na-eto nduku nke mpaghara Novosibirsk, mana, ọ dị nwute, ụfọdụ ndị ọrụ ugbo enwekwaghị mmasị na ọdịbendị ma na-ebelata mmepụta nduku.
Dịka ọmụmaatụ, n'ime KFH "Leonidov" n’afọ a, ebelatala ihe ubi site na hectare 200 rue hekta 120. Ihe kpatara ya bu ugwo ala nke ngwa ahia otutu oge na ihe isi ike n’ire ihe ubi. Mana enwere olile anya na ọnọdụ ugbu a bụ ihe na-adịru nwa oge, na ahụmịhe nke ụlọ ọrụ ahụ nwetara ga-achọ.
Ndị na-akụ nduku Siberia na-atụ anya na 2021 ga-abụ oge mgbanwe maka mpaghara ahụ, poteto ga-aghọkwa ihe ọkụkụ bara nnukwu uru. Ihe ndi a bu ihe jikotara ya na ulo oru nke osisi PepsiCo. Nhazi kwesịrị inyere nduku ụlọ ọrụ aka ịlanarị.
Tags: 2020 # 3NdukuNovosibirsk mpaghara
Nduku nduku na-aga n'ihu na mpaghara Kostroma
Akwụkwọ akụkọ nduku bụ onye sonyere na ihe ngosi AGROSALON!
Gha mkpụrụ osisi na mpaghara Novosibirsk ga-abawanye site na 33%
A ga - eme ihe ngosi agro-ụlọ ọrụ mba ofesi "Siberia Agrarian Week" site na 10 ruo 12 Nọvemba 2021 na mpaghara Novosibirsk
A na-arụ ọrụ owuwe ihe ubi na mpaghara Ryazan